Ego Ịkwụ Ụgwọ - EGay Shop
Kedu ihe bụ Stripe?
Mgbanyụ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-eduga na-enye ndị ahịa ohere inye ego ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ zuru ezu.
Stripe na-enye nchedo ego pụrụ iche:
Ịmepụta akara ịzụ ahịa iji mepụta azụmahịa na Stripe: data gị dị nro adịghị agafe na sava anyị nke na-eme ka nchekwa zuru oke
Ntuchi ezipụ na azụmahịa: SSL protocol
Nyocha 3D nkwenye siri ike
Nchebe megide mgbalị ndị hacking: RADAR anti-fraud tool
Kedu ihe bụ SSL?
Asambodo SSL na Equestrihome na PayPal na-enye gị ohere encrypt data gị ka ọ na-agafe. Adreesị saịtị ahụ site na "https" ma ọ bụ mgbachi na-aga n'ihu ya bụ nkwa na ị na-agagharị na saịtị ahụ na SSL protocol. Ọ na-enye ohere ịnweta nyocha nke mgbanwe na nzochi nke ozi nke ebutebere na-achọpụta na enweghị ike ịghachi data gị n'ụzọ aghụghọ.